चनौटे आइसोलेसन सेन्टरमा नि:शुल्क करिब डेढ महिना सेवा गरेका पौडेलको चौतर्फी प्रशंसा - Janmabhumi Post
चनौटे आइसोलेसन सेन्टरमा नि:शुल्क करिब डेढ महिना सेवा गरेका पौडेलको चौतर्फी प्रशंसा
जन्मभूमि संवाददाता १५ असार २०७८, मंगलवार २३:०९
रत्नराज्य मा.वि. का शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष रबिन्द्र पौडेलको त्याग र समाज प्रति पुर्याएको योगदानको चौतर्फी प्रशंसा गरेका छन् । उनले बलेफी-जुगल गाउँ पालिकाको संयुक्त आइसोलेसन सेन्टर चनौटेमा करिब ३ महिना नि:शुल्क स्वयंसेवक भएर काम गर्नुभएको हो ।
उनले समाजप्रति निस्वार्थ भावले सेवा पुर्याए बापत नेपाली काँग्रेस जुगल गाउँ पालिका र रत्नराज्य मा.वि. ले उच्च मुल्यांकन गर्दै पत्र मार्फत जानकारी गराएका छन् । पौडेलले आइसोलेसनमा उपचाररत कोभिडका बिरामीहरुलाई खाना बनाउने देखि पौष्टिक आहार दिलाउनका लागि ठूलो योगदान पुर्याउनुभएको थियो ।
कोभिडले संसार त्रसित भैरहेको बेला आफ्नो ज्यानको समेत प्रबाह नगरी निरन्तर कोभिड पोजेटिभको स्याहर, सुसारमा समय खर्चिनुभएको थियो । यसअघि पनि पौडेलले स्थानीय मृगौला पीडित युवकको सहयोगार्थ आर्थिक संकलन अभियान चलाएका थिए ।